သာကောတို့ လက်ချက်မိသွားရပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဖရဲသီးစိုက် တောင်သူများ…. - Myanmar Globe
Posted on 15/01/2022 15/01/2022 Author Admin	Comment(0)
သာကောတို့ လက်ချက်မိသွားရပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဖရဲသီးစိုက် တောင်သူများ…. ( ဒီလိုသာ အရှုံးပေါ်ချက်က တရားလွန်ဖြစ်နေရင် ရှေ့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ… )
မူဆယ် ၁၀၅မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တရုတ်နိုင်ငံကို တင်ပို့နေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံထွက် ဖရဲသီး ဈေးများမှာ ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီး တောင်သူနှင့်ကုန်သည်များ အရှုံးပေါ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း မူဆယ်၁၀၅မိုင်ရှိ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်မှ သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့သည့် ဖရဲများမှာ ယခင်က တစ်ကီလိုလျှင် ၇ယွမ်မှ ၈ယွမ်အထိ ပေါက်ဈေး ရရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ဈေးကွက်မှာ တစ်ကီလိုလျှင် ၅ ယွမ်နှင့်အောက်အထိ ကျဆင်းသွားကြောင်းသိရပါတယ်။
“ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖရဲဈေးများကြမ်း တမ်းစွာဈေးကျဆင်းနေပါတယ်။ ဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကြာမြင့် ရက်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် ချင့်ချိန်တင်ပို့သင့်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ဈေးကွက်အခြေအနေမှာ ၅ ယွမ် နှင့် အောက် အထိကျနေပြီး ဆက်လက်ဈေးကျနိုင်တယ်။အရည်အသွေးကျဆင်းနေသောဖရဲများရောင်းမရတော့ပါ” လို့ မူဆယ်၁၀၅ မိုင်ရှိ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်က ၎င်းတို့၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ အသိပေးရေး သားထား ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖရဲတင်ပို့မှုမှာ နှေးကွေးနေပြီးစောင့်ဆိုင်းနေရသည့် ဖရဲသီးကုန် ကားများ များစွာရှိနေသည့်အတွက် ဖရဲကားလျော့နည်းသော အချိန်မှသာ ထပ်မံ တင်ပို့သင့်ကြောင်း သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင် က အကြံပြုထားပါတယ်။ လက်ရှိဖရဲပို့ဆောင်ရာတွင် ရက်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းရခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်မြင့်မားမှုများကြောင့် တွက်ချေမကိုက်ဖြစ်နေပြီး ဈေးနှုန်းရရှိမှုယခုကဲ့သို့ ကျဆင်းပါက တရုတ်တွင်မြန်မာ့ဖရဲဈေးကွက်ပျက်သွားနိုင်ကြောင်း ကုန်သည်များက ဆိုကြပါတယ်။
လက်ရှိတွင် တရုတ်သို့ ဖရဲတင်ပို့ရန် ကုန်သည်နှင့်တောင်သူများက ခေါက်တိုကားငှားရာတွင် ဈေးပိုပေးပြီး အပြိုင် အဆိုင် တင်ကြခြင်းကြောင့် ယခင်က သိန်း ၂၀ ဝန်းကျင်သာရှိသည့်ကားငှားခမှာ လက်ရှိမှာတော့ သိန်း ၁၀၀ ကျော်ပေးရကြောင်းသိရပါတယ်။ လတ်တလောတွင် ဖရဲတင်ပို့မှုမှာအရှုံးပေါ်နေသည့်အတွက် ဆောင်းဖရဲစိုက်ပျိုးမှုများ အနည်းငယ်သာ စိုက်ပျိုးကြတော့ကြောင်းသိရပါတယ်။
သာကောတို့ လကျခကျြမိသှားရပွနျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံက ဖရဲသီးစိုကျ တောငျသူမြား…. ( ဒီလိုသာ အရှုံးပျေါခကျြက တရားလှနျဖွဈနရေငျ ရှဘေ့ာဆကျလုပျကွမလဲ… )
မူဆယျ ၁၀၅မိုငျကုနျသှယျရေးစခနျးမှ တရုတျနိုငျငံကို တငျပို့နသေညျ့ မွနျမာ နိုငျငံထှကျ ဖရဲသီး ဈေးမြားမှာ ဆကျတိုကျကဆြငျးနပွေီး တောငျသူနှငျ့ကုနျသညျမြား အရှုံးပျေါမှုမြားဖွဈပျေါနကွေောငျး မူဆယျ၁၀၅မိုငျရှိ သဈသီးဝလံကုနျစညျဒိုငျမှ သိရပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံသို့တငျပို့သညျ့ ဖရဲမြားမှာ ယခငျက တဈကီလိုလြှငျ ၇ယှမျမှ ၈ယှမျအထိ ပေါကျဈေး ရရှိခဲ့သျောလညျး လကျရှိ ဇနျနဝါရီ ၁၀ ရကျတှငျ ဈေးကှကျမှာ တဈကီလိုလြှငျ ၅ ယှမျနှငျ့အောကျအထိ ကဆြငျးသှားကွောငျးသိရပါတယျ။
“ ယခုရကျပိုငျးအတှငျးဖရဲဈေးမြားကွမျး တမျးစှာဈေးကဆြငျးနပေါတယျ။ ဈေးကှကျအတှငျးဝငျရောကျနိုငျရနျ ကွာမွငျ့ ရကျနဲ့ ကုနျကစြရိတျမြားကွောငျ့ ခငျြ့ခြိနျတငျပို့သငျ့ပါတယျ။ ဇနျနဝါရီ ၁၀ ရကျ ဈေးကှကျအခွအေနမှော ၅ ယှမျ နှငျ့ အောကျ အထိကနြပွေီး ဆကျလကျဈေးကနြိုငျတယျ။အရညျအသှေးကဆြငျးနသေောဖရဲမြားရောငျးမရတော့ပါ” လို့ မူဆယျ၁၀၅ မိုငျရှိ သဈသီးဝလံကုနျစညျဒိုငျက ၎င်းငျးတို့၏ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ အသိပေးရေး သားထား ပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံသို့ ဖရဲတငျပို့မှုမှာ နှေးကှေးနပွေီးစောငျ့ဆိုငျးနရေသညျ့ ဖရဲသီးကုနျ ကားမြား မြားစှာရှိနသေညျ့အတှကျ ဖရဲကားလြော့နညျးသော အခြိနျမှသာ ထပျမံ တငျပို့သငျ့ကွောငျး သဈသီးဝလံကုနျစညျဒိုငျ က အကွံပွုထားပါတယျ။ လကျရှိဖရဲပို့ဆောငျရာတှငျ ရကျကွာမွငျ့စှာစောငျ့ဆိုငျးရခွငျး၊ သယျယူပို့ဆောငျစရိတျမွငျ့မားမှုမြားကွောငျ့ တှကျခမြေကိုကျဖွဈနပွေီး ဈေးနှုနျးရရှိမှုယခုကဲ့သို့ ကဆြငျးပါက တရုတျတှငျမွနျမာ့ဖရဲဈေးကှကျပကျြသှားနိုငျကွောငျး ကုနျသညျမြားက ဆိုကွပါတယျ။
လကျရှိတှငျ တရုတျသို့ ဖရဲတငျပို့ရနျ ကုနျသညျနှငျ့တောငျသူမြားက ခေါကျတိုကားငှားရာတှငျ ဈေးပိုပေးပွီး အပွိုငျ အဆိုငျ တငျကွခွငျးကွောငျ့ ယခငျက သိနျး ၂၀ ဝနျးကငျြသာရှိသညျ့ကားငှားခမှာ လကျရှိမှာတော့ သိနျး ၁၀၀ ကြျောပေးရကွောငျးသိရပါတယျ။ လတျတလောတှငျ ဖရဲတငျပို့မှုမှာအရှုံးပျေါနသေညျ့အတှကျ ဆောငျးဖရဲစိုကျပြိုးမှုမြား အနညျးငယျသာ စိုကျပြိုးကွတော့ကွောငျးသိရပါတယျ။